Ukufunda iincwadi kubalulekile ebomini bomntu, kodwa indima ekhethekileyo loo nto idlalayo ebuntwaneni. Abantwana bafuna nje ukuphuhliswa ngoncedo lweencwadi, kuba bevela apho bafunda izinto ezininzi, bafumana ulwazi oluyimfuneko, bavelise ubuchule kunye nokukhawuleza kokufunda, bafumane izakhono zegrama, baqeqeshe ukucinga okucwangcisekileyo kunye nokucinga, bandise i-horizons yabo. Akunabo bonke abantwana abanokufumana uncwadi olufanelekileyo kwiminyaka yabo kunye neminqweno, ngoko kubalulekile ukuyiqondisa, ukunceda ekukhetheni iincwadi. Incwadi yemarike inikeza inani elaneleyo leencwadi ezinomdla kubantwana abaselula, kodwa kukho uninzi lweencwadi ezincinci, ngoko abazali kufuneka banomdla kwaye bahlole yonke into esezandleni okanye etafileni yomntwana wabo.
Yaye nangona abafundi bezikolweni eziphakamileyo banokuzikhethela iimfuno zabo kunye nokukhetha kwabo, abazali kufuneka bakhethe iincwadi zabo zeminyaka. Xa ukhetha uncwadi, qaphela ukuba le ncwadi ihambelana nomntwana womntwana, qwa lasela iimpawu zobudala bakhe, isantya sokuphuhliswa kwayo. Oku kubalulekile, kuba ukuhluka kwiminyaka emininzi kuyimfuneko, kwaye incwadi leyo, eyenzelwe umntwana oneminyaka eli-10 ubudala, iya kuba yinto engathandekiyo kwaye ingadingekanga kwiminyaka elishumi elinesihlanu. Funda ngokucophelela ukuhlaziywa, izichaso kwiincwadi kwaye ukhethe uncwadi ngokweminyaka yeselula.
Funda umbhalo weencwadi ngokucacileyo. Kumele kubhalwe phantsi kweelwimi, ngaphandle kokusebenzisa amazwi angcolileyo kunye ne-slang. Kwaye nangona ufumanisa uluvo lokuba umbhali usebenzisa ezo ndlela ukubonisa umoya wezinto ezenzekayo, shiya ezi ncwadi zokufunda kubantu abadala. Ngokuqhelekileyo abatsha bafumana indlela, indlela yokuziphatha, ingxoxo, imikhwa yeqhawe abayithandayo kwaye baqale ukumxelisa, okungenakukukholisa.
Uncwadi olutsha kufuneka lube ngumgangatho ophezulu. Kwaye kungakhathaliseki ukuba kuthethwa ntoni kumsebenzi, nokuba ngaba imicimbi yefantasy kunye nezinye ihlabathi okanye izitrato eziselula, kufuneka zifundise kwiimpawu zokuziphatha zomntwana, zikhokele, zandise i-horizons yayo.
Xa beselula, abantwana bayamkela, basabela kwiinto zonke ezenzekayo. Oku kuqinisekiswa ngokunyaniseka kwabantwana abaselula abakopisha indlela yokuziphatha kunye nemikhwa yabo yoontanga, abahlobo, amaqhawe amaqabunga kunye namafilimu. Yilokho iincwadi ezisezantsi ezinobungozi. Iyakuchukumisa iimbono kunye nophuhliso jikelele lomntwana, yenze umfanekiso ongalunganga wehlabathi kunye nesimo sengqondo ebomini. Abazali akufanele bavumele le meko. Gwema kuya kunceda uncwadi lwe-classic, impembelelo yolu vavanyo kwizizukulwana ezininzi zabantu, kunye neencwadi ezilungileyo ngababhali benamhlanje.
Imisebenzi ka-Erich Maria Remarque ngumzekelo omhle. Uninzi lwabalingani ngabantwana okanye ngoku kutshanje bekunjalo, okanye bahlala behlala eshazini. Kwiphepha le ncwadi unemvakalelo enzulu, ihlabathi elisijikelezile liqondwa, iimfazwe ziyaqhubeka, ukulwa kwenzeka, ukufa okubuhlungu kwenzeka-konke oku kubonakaliswa kumphefumlo womntwana wakho. Emva kokufunda imisebenzi ye-Remarque entliziyweni kunemvakalelo yokuhlanjululwa kunye nokudabuka okulula, okulula. Kuloo ncwadi ukuba abantwana abaselula bafumana ingcamango efanelekileyo malunga nobulungisa, ukunyaniseka, ubuhlobo bokwenene, uthando olunyanisekileyo kunye nenkalipho yokwenene.
Amabali aseArkadiy Averchenko ayaziwa kakhulu ngenxa yehlazo eliqhaqhaqisayo kunye neengcambu ezibuqilileyo. Kwaye nangona izenzo zenzeka kwikhulu leminyaka elidlulileyo, i-analalo kunye nehlabathi lanamhlanje inomdla kakhulu. Kuhlekisa ukuzibona wena, iintshaba zakho kunye nabahlobo kwiiqhawe zezenzo zika-Averchenko.
Ukongezelela koku ngasentla, iincwadi ezivelele kubaselula ziyimisebenzi yabalobi baseSoviet uAleksin, iZoshchenko, Gaidar. Zinyanisekileyo, zinyanisekile, zinobubele, nangona iinjongo zamandla aseSoviet. Izicwangciso zeencwadi zabo azikho ngaphantsi kobukhali kubacuphi banamhlanje.
Eyona nto inomdla kunye nokubhoboza "i-goosebumps" elukhumbeni yiyona imisebenzi kaJerome David Salinger. Amaqhawe amabali akhe ahlangene nabantu abaselula. Ihlabathi likaSalinger lingena kumfundi, lidibanisa neyinyani, ngaloo ndlela kubangela iimvakalelo ezininzi.
Indlela yokwakha ubudlelwane nomama omdala?
Izizathu zokutshaya kwabantwana abangaphantsi
Indlela yokuqonda, abazali basebenza, kwaye abantwana banandipha ubomi
Intombazana kunye nesimo sakhe sengqondo esichaphazela abanye
Iibhola zebantwana ezisusela kwiminyaka eyi-10 ukuya kwi-12
Umntwana kunye nendlela isiseko seleko
Indlela elula yokunciphisa umzimba: iingcebiso zesazi sengqondo
Umthendeleko weNkcazo yeNkosi ngo-2018: imifanekiso eneemibhalo, uyathokoza kwivesi kunye neprose
Yonke into malunga nokupheka
Isaladi yezithelo "Margarita"
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli ye-ginger
Ngendlela efanelekileyo ukuhlamba ityuwa?
Ubisi bezilwanyana ezinobisi beenkomo kwiintsana